NA SALPHIFTE INTALA KOO-Qoosaa gabaabf barsiisaa!!- Don’t Stop!!ktktktkttk – Beekan Guluma Erena
NA SALPHIFTE INTALA KOO-Qoosaa gabaabf barsiisaa!!- Don’t Stop!!ktktktkttk	Beekan Guluma Erena
Education May 4, 2016May 4, 2016
NA SALPHIFTE INTALA KOO
Qoosaa Afaan Oromoo kanaan bohaaraa
Haadhaa fi intalatu mana tokko keessa jiraachaa ture. Abbaan intala kanaa daa’imummaan irraa du’e. Akka haadhaa fi abbaattis rakkatee kan guddise haadhumasheeti. Mucaan dubaraa kun guddattee umuriin ishee barnootaaf geenyaan mana barnootaa seentee kutaa 1ffaa barachuu eegalte.
Haatishee halkanis guyyaas inuma gorsiti. Guyyaa Tokko akkas jettee intalashee gorsuu eegalte. Mucaa koo ati anaaf,obboleessa,obboleettii,ollaa,fira,ilmoo dhiiraa fi dubaraa,akkasumas abbaa manaa kooti. Ani si malee nama biraa of biraa hin qabu. Yoo har’a jabaattee baratte anas biyya kees ni fayyadda. Kafaafuu Intala koo jabaadhuu naaf baradhu,nama guddaa naaf ta’i,maqaa abbaa kee naaf kaasi/waamsisi malee intala dubartiin guddifte jettee maqaa koo nan balleessiin jettee akeekkachiifti. Intallis tole harmee koo naaf jiraadhu,gorsaa fi imaanaa kee eegeen jiraadha jettee harmeeshee gammachiifte.
Osuma bifa kanaan jiraachaa jiranii jiini ji’a dabarsee,intalli guddattee waggaa 14 geesse. Guntuta baafte,qaamnishee marti guddachuu eegale.
Haatishee gurguddachuu fi saffisa qaamota intalashee erga hubatteen booda akkas jettee gorsuu eegalte.
Intala koo qaamni kee marti jijjiirramaa jira,harmas baaftee jirta,ija dhiiraas guutteetta adaraa kee of eeggadhu. Dhiirri sin gowwomsiin….jetteen.
Intallis yeroo sanaaf tole jettee gorsa harmeeshee fudhatte.
Barnoota kutaa 8ffaa osoo barachaa jirtuu intalittiin ijoollee dhiiraa waliin taphaa fi haasaa eegalte.
Gaaf Tokko mucaan dhiiraa wayii waliin mana barnootaa osoo galuuf deemanuu gaaddisa jala boqonnaaf gadi taa’an.
Isiniif illee marga buqqefadheera….. Mucichis intala tutuqee,hooksee taphachiisuu eegale. Osuma taphatanuu dhungate,isheenis dabareeshee dhungatte. Tapha keessa wal kuffisanii,wal gangalchanii saal-qunnamtii raawwatan,dubrummaan intalaas bade.
Ji’a sadiin booda mucayyoo garaatti hafe/ni ulfoofte jechuu kooti.
Intallis baay’ee sodaatte. Akka ulfoofte hadhasheetti himuu sodaatte. Turtii ji’a afuriin booda ulfi irratti mul’achuu waan eegaleef dursitee haadhatti himuuf murteessite.
Haadha….. Oo koo dhala koo
Intala…. yoon waa sitti himadhe natti mufattaa?
Haadha….lakki ati ilmoo koo mitii…maaliifan sitti mufadha?
Intala……Haa..haar….haarm…harmee koo nan ulfaa’e.
Dhiirri tokko harma kee yoo si tuqe “dont” jedhi,yoo qaama saalaa kee si tuqe “stop” jedhi siin hin jennee ani?
Intala….. Lakkimee harmee koo waan siif hin galletu jiraam.
Haadha…. Maalinni waanti naaf hin galle?
Intala…..Atillee akkas jettee na gorsiteetta. Garuu mucichi harma koos,qaama saalaa koos al-tokko waan na tuqeefan animmoo “don’t stop” jedheen. Achumaan mucaanis natti jabaate……
Haadha…..Uuuu salphadhu na salphifte intala koo!
← EEBBA MAANUGUDDOO OROMOO-Aadaa Boonsaa Sabni keenyaa qabu!!
TORBA WALIIF GALLEE, TORBA DIIGAMUUN HAADHAABBATU-Tokkummaan keenya Haajabaatu!! →